ဒီနေရာမှာသင်ဟာအမေးအများဆုံးမေးခွန်းများရဲ့အဖြေများ၊ လျှင်မြန်စွာကုန်ပစ္စည်းရောင်းထွက်ရန်နှင့်လုံခြုံစိတ်ချရသော ဈေးဝယ်မှုလမ်းညွှန်တို့ကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
အိမ်တစ်လုံးကို ဘယ်လိုရောင်းရမလဲသင်၏ကားကို ဘယ်လိုရောင်းမလဲသင့်ရဲ့ဖုန်းကို ဘယ်လိုရောင်းမလဲ
၁. မှန်ကန်သင့်တင့်သော ဈေးနှုန်းကိုရွေးချယ်ပါ
သင့်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ ဆင်တူတဲ့ကြော်ငြာအမျိုးအစားတွေကို ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်မှာလိုက်လံကြည့်ရှုပြီးမှန်ကန်
၂. အချက်အလက်စုံလင်တိကျသော ဖော်ပြချက်ကိုရေးသားပါ
၃. ဓာတ်ပုံပါဝင်တဲ့ကြော်ငြာက (၇) ဆပိုမြန်မြန်ရောင်းထွက်ပါတယ်!!!
သင့်ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းမြန်မြန်ရောင်းထွက်စေဖို့အတွက် သင့်ကြော်ငြာရဲ့ ဖော်ပြချက်ကို ဒေါင့်ပေါင်းစုံက ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တွဲဖက်တင်ပေးပါ။ အနည်းဆုံးတစ်ပုံမျှတင်သင့်ပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ သင့်ရဲ့အိမ်ခြံမြေကို အမြန်ရောင်းထွက်စေဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အကြံပြုချက် တွေပါ:
ရှင်းလင်းတိကျတဲ့ ဖော်ပြချက်ကိုရေးပါ :
သင့်ကြော်ငြာရဲ့ဖော်ပြချက်ဟာ သင့်အိမ်ကို မျက်နှာပန်းလှစေပါသည်။ ဒီအချက်အလက်ဟာ ဝယ်ယူသူကို ဦးဆုံးအထင်ကြီးမှုကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်ရဲ့စာနှင့်ဖော်ပြချက် များမှာ အမှားကင်းစင်ဖို့ အရေးကြီးလှပါတယ်။ စကားလုံးအနည်းငယ်နဲ့ သင့်အိမ်ရဲ့ နေရာ၊ အကျယ်အဝန်း၊ အခန်းအရေအတွက်နှင့် သင့်အိမ်ရဲ့ ထူးခြားအားသာချက် များကိုဖော်ပြသင့်ပါတယ်။
တည်နေရာဒေသနှင့် အိမ်၏အရည်အသွေးကိုထည့်သွင်စဉ်းစားပြီး ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ဦး၏ အကြံပေးချက် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်မှ အခြား ကြော်ငြာများ၏ဈေးနှုန်းများကို လေ့လာ၍ ဈေးနှုန်းသင့်တင့်မှန်ကန်စွာသတ်မှတ် ရန်အရေးကြီးလှပါသည်။ သင်၏ဈေးနှုန်းမှာ မြင့်မားလွန်းနေပါက ဝယ်ယူလိုသူရှာ တွေ့ရန်ခက်ခဲနိုင်ပါသည်။
သင်၏ကြော်ငြာတွင် ကောင်းမွန်ပြီးပြည့်စုံသောပုံများကိုတင်ပါ။ သင်၏ အိမ်ကိုဝယ်ချင်လာအောင် အကောင်းဆုံးတင်ပြနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။ အခန်းများအားလုံး၊ အိမ်ပတ်ပတ်လည် စသဖြင့် ဓာတ်ပုံများများရ နိုင်သလောက်တင်ပါ။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောပုံများရရန် Digital Camera ကိုအသုံးပြုပါ။
လူသတိထားမိလောက်အောင် ကောင်းမွန်ပြည့်စုံစွာရေးသားထားတဲ့ကြော်ငြာဟာသင့်ကားကိုမြန်မြန်ရောင်းထွက်နိုင်အောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်သင်ဟာကားအဟောင်းတစ်စီးကို ရောင်းတဲ့အခါမှာပေါ့။
သင့်တင့်	ကောင်းမွန်သောဈေးနှုန်း :
ချိုသာကောင်းမွန်တဲ့ဈေးနှုန်းတစ်ခုဟာ ဝယ်ယူသူအများကြီးကိုစွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အင်ဂျင်အမျိုးအစား၊ မော်ဒယ် သို့မဟုတ် မောင်းထားတဲ့ခရီးပမာဏ စတဲ့အချက်တွေက သင့်ကားဈေးနှုန်းကိုသတ်မှတ်ရာမှာ လွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်။
နေရာဒေါင့်ပေါင်းစုံကရယ်၊ ကားအတွင်းခန်းရယ်၊ အင်ဂျင်ရယ်ကို ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံများများပါလေ ပိုကောင်းလေပါ။ ထိုအရာက ဝယ်ယူသူရဲ့ယုံကြည်မှုကို ရရှိစေဖို့ အများကြီးအထောက်အကူပြုပါတယ်။
ကားရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်အလက်တွေ၊ကွဲပြားချက်တွေကိုရေးထားတဲ့ဖော်ပြချက်ဟာဝယ်ယူသူ တစ်ယောက်ကိုတခြားကားမဟုတ်ပဲသင့်ကားကိုပဲ ဘာကြောင့် ဝယ်ယူသင့်တယ်ဆိုတာသဘော ပေါက်စေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့သင့်ကားမှာ အခြားပစ္စည်းကိရိယာတွေ ပါဝင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြသင့်ပါတယ်။
AC, ABS, power steering ကားနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာ တိုင်းနီးပါး ပါဝင်သင့်ပါတယ်။ တစ်ချို့အချက်အလက်တွေဟာ သင့်အတွက်အကျိုးမရှိဘူး ထင်ရပေမယ့်ဝယ်ယူသူရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်အများကြီးသက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
သင်ရဲ့ကြော်ငြာဟာ လုံးဝယုံကြည်ရတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားသင့်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီကားဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့ရောင်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ငွေလိုသဖြင့်ရောင်း ခြင်းဖြစ်ကြောင်း စသဖြင့်သင့်ကားကို ရောင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဖော်ပြသင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကားဟာ တစ်ခုခုချို့ယွင်းနေလို့ ရောင်းတယ်လို့ ဝယ်ယူသူကအထင်မရောက်နိုင်တော့ပါဘူး။
ကားပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်က ကားကိုရောင်းချခြင်းဖြစ်ကြောင်း သေချာအောင်စုံစမ်းပါ။
ကား၏မူရင်းဇစ်မြစ်ကို အမြဲစစ်ဆေးပါ။ (ခိုးယူလာသောကားမဟုတ်ကြောင်း သေချာပါရန်။)
ပြုပြင်ထိမ်းမှုမှတ်တမ်းသည် ရှိပါက ပါဝင်ချက်များမှန်ကန်ကြောင်းစစ်ဆေးပါ။
ကညန လိုင်စင်မှတ်တမ်းမှာ တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း စစ်ဆေးပါ။
ပြင်ပမှခေါ်ထားသော စက်ပြင်ဆရာဖြင့် ကားကိုစစ်ဆေးပါ။
သင်ဟာ ads.com.mm မှာသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုရောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင် သင့်ကြော်ငြာဟာ အခြားသူများရဲ့ ကြော်ငြာတွေထက်သိပ်မထူးခြားတာကို သတိပြုမိမှာပါ။
ဖုန်းရှာဖွေမှုအများစုဟာ “ပုံပါသောကြော်ငြာများ” ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ စစ်ထုတ်ရှာဖွေကြပါတယ်။ သင်တင်တဲ့ဓာတ်ပုံများ ကြည်လင်ရှင်းလင်းနေစေဖို့ မီးအလင်းများများနဲ့ ရိုက်သင့်ပြီး ပုံကို တတ်နိုင်သလောက်များများတင်ပါ။ (အထူးသဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်နဲ့ ထိခိုက်မှုရှိထားရင် ရှိတဲ့နေရာတို့ကို သေချာရိုက်သင့်ပါတယ်)
ထိခိုက်မှုရှိထားခဲ့ရင် ရှိတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ သင့်ဖုန်းအခြေနေကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာရှင်းပြထားပါ
ads.com.mm ဟာ အသုံးပြုပြီးသားကုန်ပစ္စည်းတွေကို ဝယ်ယူရောင်းချတဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူသူတွေက သင့်ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း ပွင့်လင်းမြင်သာစွာရေးသားထားခြင်းကို လက်ခံ အားပေးကြပါတယ်။ ဒီလိုရေးသားတင်ပြချက်က သင်ရဲ့ရိုးသားတဲ့ရောင်းချသူတစ်ဦးဖြစ်တာကိုသိ သာစေပြီး သင့်ဖုန်းကို အမှန်တကယ်စိတ်မဝင်စားတဲ့သူတွေက ဆက်သွယ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားစေနိုင် ပါတယ်။
အခြားသော အလားတူကြော်ငြာများကို ကြည့်ရှုလေ့လာပြီး သင့်ဖုန်းကိုဘယ်လိုဈေးနှုန်းသတ်မှတ် ရမလဲဆိုတာအကြံဥာဏ်ယူနိုင်ပါတယ်။ သင့်တင့်မျှတတဲ့ဈေးနှုန်းကိုထားခြင်းက သင့်ဖုန်းကို လျှင်လျှင်မြန်မြန်ရောင်းထွက်စေနိုင်ပါတယ်။